Fandikan-dalàna nataon-dRajoelina : Mitazam-potsiny ny CENI sy ny Governemanta -
AccueilRaharaham-pirenenaFandikan-dalàna nataon-dRajoelina : Mitazam-potsiny ny CENI sy ny Governemanta
28/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mangina tanteraka manoloana ny fandikan-dalàna nataon’i Andry Rajoelina ny Ceni ( Vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana) sy ny Governemanta amin’izao fotoana izao. Efa manao fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana tokoa mantsy ity filohan’ny Tetezamita teo aloha ity. Rehefa avy tany Mahajanga izy dia nanohy ny diany tany Befandriana Avaratra indray. Ny sary miparitaka amin’ny tambazotra sosialy moa dia manaporofo fa tena praopagandy no hataony. Izy rahateo tsy olom-panjakana, na depiote, na olom-boafidy ka hanan-jo hanao fitsidiham-paritra.
Manararaotra tahaka ireny banga mihomehy amin’ny alina ireny izy manatanteraka izany satria “hono governemantan’ny marimaritra iraisana” . Matahotra an-dRajoelina tokoa angaha ny “Ceni” no tsy miteny manoloana izao tranga izao ? Mavozo an-dRajoelina koa angaha ny Governemanta tarihin’i Ntsay Christian no moana tsy mahaloa-bava na dia “communiqué” iray aza tsy sahy navoaka ho fanamelohana izany ? Sa hoe rehefa avy amin’ny Mapar ny praiminisitra dia afaka manao izay tiany hatao ry Rajoelina ? Aoka hazava fa tsy hoe rehefa governemantan’ny marimaritra iraisana dia manao izay tiany hatao ny lehiben’antoko. Tokony hitsangana avy hatrany ireo andrim-panjakana roa ireo hanameloka izao fihetsik’i Rajoelina izao.
Raha kandidà ihany ingahy Rajoelina amin’ny filatsahan-kofidiana manaraka eo, dia mendrika ny ho “disqualifié” avy hatrany. Efa ireny miparitaka eraky ny facebook ireny ny porofon’ny hagegena nataony amin’ny resaka lalàm-pifidianana. Dia mbola ho sahy handà ihany ve ny Ceni sy ny Governemanta fa mety izao hataon-dRajoelina izao ? Ekena fa manjavozavo ny lalàna momba ny “pré-campagne” saingy izao ataon-dRajoelina izao kosa efa tena tsy azo ekena. Tsy ny maha manjavozavo ilay lalàna no entina hanararao-paty , hanaovana fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana. Mba samy afaka manao izany avokoa anie ireo kandidà marobe efa nilaza fa kandidà Filoham-pirenena ( Dama, Patrick Raharimanana, Eliane Bezaza, Ravelonarivo Jean, …), saingy noho ny fanajan’izy ireo ny lalàm-pifidianana dia miandry ny fe-potoana mahamety izany fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana izany izy ireo.
Tsy azo ekena ny lalao maloto toa izao ataon-dRajoelina izao, ary raha mbola te hanana ny hasiny eo imason’ny olom-pirenena ny Ceni sy ny Governemanta dia tokony handray fepetra momba an-dRajoelina. Adidin’ity governemanta tarihan’i Ntsay Christian ity ny misoroka mialoha ny fangalarana fiaingana tahaka izao. Efa izy no nanankinana ny fikarakarana ny fifidianana ka adidiny no mandray fepetra amin’ny olon’ny Mapar mpandika lalàna toa izao. Na vao miana-mandeha amin’ny sehatry ny fanaovana politika aza ny Praiminisitra Ntsay Christian dia aleo ampitaina aminy fa tsy tokony hananan-kavana ny fitondrana ny firenena, ary tsy hijerena tavan’olona ny fampiharana ny lalàna raha te ho tody any amin’izany fifidianana eken’ny rehetra izany.
Herinandro tsy hikatonan’ny fanateran’ireo antontan- taratasy firotsahan-kofidiana ho filoham-pirenena eny amin’ ny HCC, miisa 12 ireo kandida efa nanatitra dosie amin’ izao fotoana izao. Andrasana hatramin’ny faha 21 ny volana Aogositra kosa, ny an’ireo kandida ...Tohiny